China I-HD Vision Glasses 2pair abavelisi kunye nabathengisi | Uhlobo
Izinto zokudlala zaBantwana
Umbono we-HD yokuSonga ujikeleze
Magna Optix Izibuko
Umnxeba oshukumayo-iTwin Grip
Ixabiso leFOB USD0.39 / pc
Min.Order Ubungakanani 100 Piece / Pieces
Amandla okubonelela 100000 Piece / Pieces Inyanga nganye
Ukusetyenziswa ukuhamba, ukuqhuba, ukuthenga, ukuhamba, ukuthatha imifanekiso kunye nemisebenzi yangaphandle
Izibuko shanghai ningbo
Igama lemveliso: HD Vision Izibuko
Inombolo yomzekelo: BH008
Izixhobo: ilensi: Isakhelo se-AC: iPC
Ubude (cm): I-17 x5 x8
Ubunzima (g): 64g
Ukupakishwa kwemveliso: Ingxowa yeblue + Ibhokisi yombala
Ubunzima bobunzima (kg) 4.4
Ubunzima bomzimba (kg): 3.8
Ubungakanani beCarton (cm): 34 x 32 x 36
Ixesha lokukhokhela 1. Kwisitokhwe esilungeleyo: kwiintsuku ezisi-7 emva kokufumana intlawulo.
2. Kwiimveliso ezikhoyo kwisitokhwe: kwiintsuku ezingama-25 ~ 40 emva kokufumana intlawulo.
Ixesha lesampula Iintsuku ezi-3 ukuba iisampulu zikhona
Iintsuku ezi-3 ukuya kwezi-15 ukuba iisampulu kufuneka ulungelelanise
HD Vision Izibuko
Ezi zibuko zelanga zikulungele kakhulu ukuhamba, ukuqhuba, ukuya ezivenkileni, ukuhamba, ukuthatha imifanekiso kunye nemisebenzi yangaphandle.
Ukujonga okuSmart kunye neMfashini: Phinda uyichaze uyilo lwakudala, usebenzisa isitayile sangoku, efanelekileyo kuyo nayiphi na imeko.
Ilensi yeNgcaciso ePhakamileyo: Ikhupha umbala kunye nokucaca ngaphaya kokucinga kwakho.
Uyilo lwefashoni luguqula kakuhle imeko yobuso bakho kwaye lukuvumela ukuba ulungiselele nayiphi na imisebenzi yemihla ngemihla.
Ngokujoyina i-HD element, ezi ntlobo zeglasi ziyanciphisa ukukhathala okubonakalayo kunye nokukhuselwa kwamehlo.
Thina, NINGBO KINDHOUSEWAREMANUFACTURING CO, LTD yasekwa ngo-2002, ikomkhulu elibhalisiweyo lesigidi esi-1, ngumenzi wobuchule kunye nelithumela kwelinye ilizwe ejongene noyilo, uphuhliso kunye nokuveliswa kwempahla yendlu. Ifunyanwa e Ningbo City, Zhejiang kwiPhondo, China, kufuneka ukufikelela zokuhamba lula ehlabathini lonke.
Emva kweminyaka eli-10 yophuhliso siye safumana ubutyebi bamava okuvelisa kwaye sigxila kwimveliso yekhitshi, izixhobo zekhaya, izixhobo zemoto, izinto ezindala kunye neemveliso ezinxulumene noko.
Siza kuhlala siqhuba ulawulo lwethu ngokuthembeka kunye nokutya okumnandi, sinobuchule bokuphumelela kwaye siphumelele izibonelelo ezifanayo njengenjongo, ngokuthembekileyo ukubonelela abathengi bethu behlabathi ngomgangatho ophezulu, iimveliso zexabiso kunye nenkonzo yokuphendula ngokukhawuleza.
1. Inkxaso yobuchwephesha: Sitshintsha ikhabhathi izimvo zakho kunye nemiba yakho ibe yimveliso yokwenyani.
2. Ixabiso: Sinemigca yethu yokuvelisa, kwaye sinokubonelela ngexabiso lokukhuphisana.
3. Umgangatho ophezulu: Ukusuka kwimpahla eluhlaza ukuya kwimveliso yokugqibela, ukusuka ekuhanjisweni ukuya kumaxwebhu, yonke i-tepare iphononongwe ngabasebenzi abaqeqeshwe kakuhle ukuze baqiniseke ngokugcwala kwakho.
Inkonzo ye-OEM: Siza kwenza amalungiselelo emveliso esekwe kwiimfuno zabathengi.
5. Ukuhanjiswa kwe-ON-time: Siza kwenza amalungiselelo okuvelisa iimveliso ngokufanelekileyo, ukuqinisekisa ukuba iimpahla ziya kulungiswa kakuhle njengoko zicwangcisiwe.
6. Ixabiso elifanelekileyo, umgangatho we-Eecellent kunye nenkonzo yokunika ingqalelo.
Egqithileyo HD Vision Izibuko 1pair
Izibuko zelanga zangokwezifiso
Izibuko zelanga zeentyatyambo
Iiglasi ezijikelezileyo zelanga
Iiglasi zelanga zomntu
Iiglasi zelanga zamadoda
Iimpawu zeLanga zeGlasi
Inqanawe eshukumayo -Wonder Walker kunye noClever ...
Umlingo wokugqibela woMlingo kunye neAlarm-Twin Grip
Isilika yenza kube lula ukusika amashiya ngombane
No.7, Jinshan Second Road, Taoyuan Street, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang kwiPhondo, China
Amacwecwe ePlastiki alukhuni, Izixhobo zokuCoca imoto, Izibuko zelanga zangokwezifiso, INdebe yeNdebe yeMoto eyandisayo, Sela imoto yokubamba, Ipleyiti yePlastiki enokuphinda isebenze,